ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ မှန်တံခါးတစ်ချပ်ကို လူနာတစ်ယောက်မှ အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ရိုက်ခွဲကာ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခဲ့ – CharTake
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ မှန်တံခါးတစ်ချပ်ကို လူနာတစ်ယောက်မှ အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ရိုက်ခွဲကာ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခဲ့
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ မှန်တံခါးတစ်ချပ်ကို လူနာတစ်ယောက်က အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ရိုက်ခွဲကာ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခဲ့
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ ကိုဗစ်ထိန်းချူပ် ကုသရေးအဆောင်ရဲ့ Slide Door မှန်တံခါးကို လူနာတစ်ယောက်က အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ရိုက်ခွဲခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် ဒီနေ့မနက် (၅) နာရီကျော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
” ကျွန်မတို့က ဒီကအငယ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှတော့အများကြီး မပြောနိုင်ပါဘူး။ မနက်က ဖြစ်ခဲ့တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။” လို့ ကိုဗစ်ဌာနက ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားသူက O Media ကို ပြောပါတယ်။
ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဟာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ဖ.ဆ . ပ.လ ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့သူလို့သိရပြီး သူ့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ (၂) ပေ အရှည်ရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ မှန်တံခါးတွေကို ရိုက်ချိူးခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံလုံခြုံရေးတွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဖျားနာကုသဆောင်ကို စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်က လာရောက်ပြသခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ တို့ဖတ်ကိုတော့ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်ကယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဆေးရုံရဲ့ အဝင်အထွက်တံခါးတွေကို ပလက်စတစ်နဲ့ ခေတ္တကာရံထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Source ; O Media
Unicode … ရနျကုနျဆေးရုံကွီးမ မနျတံခါးတဈခပျြကို လူနာတဈယောကျက အောကျဆီဂငျြအိုးနဲ့ရိုကျခှဲကာ ထှကျပွေးရနျကွိုးစားခဲ့
ရနျကုနျဆေးရုံကွီး၊ ကိုဗဈထိနျးခြူပျ ကုသရေးအဆောငျရဲ့ Slide Door မနျတံခါးကို လူနာတဈယောကျက အောကျဆီဂငျြအိုးနဲ့ရိုကျခှဲခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျ ဒီနမေ့နကျ (၅) နာရီကြျောမာ ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
” ကြှနျမတို့က ဒီကအငယျတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဘာမတော့အမြားကွီး မပွောနိုငျပါဘူး။ မနကျက ဖွဈခဲ့တာတော့ ဟုတျပါတယျ။” လို့ ကိုဗဈဌာနက ဖုနျးလကျခံဖွကွေားသူက O Media ကို ပွောပါတယျ။
ထှကျပွေးဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့သူဟာ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ ဖ.ဆ . ပ.လ ရပျကှကျမာ နထေိုငျတဲ့သူလို့သိရပွီး သူ့ကိုတပျဆငျပေးထားတဲ့ (၂) ပေ အရညျရတဲ့ အောကျဆီဂငျြအိုးနဲ့ မနျတံခါးတှကေို ရိုကျခြိူးခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံလုံခွုံရေးတှကေ ဖမျးဆီးခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။
သူဟာ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့အတှကျ ရနျကုနျဆေးရုံကွီး ဖြားနာကုသဆောငျကို စကျတငျဘာလ (၂၂) ရကျက လာရောကျပွသခဲ့သူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ တို့ဖတျကိုတော့ စကျတငျဘာလ (၂၃) ရကျကယူထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ အခုခြိနျမာတော့ ဆေးရုံရဲ့ အဝငျအထှကျတံခါးတှကေို ပလကျစတဈနဲ့ ခတ်ေတကာရံထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ Source ; O Media